အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 189
ကာတွန်း စောငို – အဆိပ်သင့် မသင့် ဇန်န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း စောငို – ပုဆုိုးနဲ့ တိုက်ပုံ ၀တ်လာပါ
ကာတွန်း စောငို – ပုဆုိုးနဲ့ တိုက်ပုံ ၀တ်လာပါ ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း စောငို – ၂၀၀၈ ကို ကြုံတိုင်းမှာ ထားရစ်ခဲ့ ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ဒီမိုခေတ်မှာ အလှူဒါန ပြုကြသူငှာ၊ လာဘ်ပေးတာ မဟုတ်ရပါ ဇန်န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ အရေးတယူ ဆောင်ရွက်ရေး ဒို့အရေး
ကာတွန်းစောငို – လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ အရေးတယူ ဆောင်ရွက်ရေး ဒို့အရေး ဇန်န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
တော်လှန်တဲ့ ပညာရေးဘ၀၊ သင်ရိုး၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ၊ ဇန်န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၃ မြန်မာပြည်မှာ တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်တွေ မြှင့်တင်တော့မယ်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ ကြားမိတယ် ထင်တာပဲ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့၊ စက်မှုတက္ကသုိုလ်တို့လည်း အရင်တုန်းကလို သင်ရိုးကုန်၊ သက်တမ်းပြည့် ပြန်ဖွင့်မယ်လို့ ဆိုတယ် ပြောတယ်။ သူတို့ပြောတာက စာသင်နှစ် ၁ နှစ် အပြည့်သင်မယ်၊ ဘာသာရပ်တွေကို ၄ နှစ် တာ၊ ၆ နှစ်တာ အပြည့်၊ တတန်းကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘာသာတွေ ၇ ဘာသာ ၈ ဘာသာ အပြည့် သင်မယ် ပြောတာလား မသိဘူး။ ဒါက တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဆင့် ပညာရေးသင်ကြားပုံ နည်းစနစ်ကို...
ဆီယက်တဲလ်က (၅)ကြိမ်မြောက် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျော်ဟုန်း (မိုးမခ)၊ ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၃ ။ ကရင်အမျိုးသားများရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြသကြတဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို ဆီယက်တဲလ်ရှိ ကရင်မိသားစုများ စုပေါင်းကျင်းပလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၅)ကြိမ်မြောက် ရှိခဲ့ပါပြီ။ ယခုနှစ်မှာတော့ 12010 South, East 240th Street, Kent, WA 98031-5043 မှာတည်ရှိတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝန်းမှာရှိတဲ့ မိုးလုံလေလုံ ခန်းမဆောင်မှာ ဂျန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၃၊ စနေနေ့ က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီကရင်ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို The Karen Community of Seattle မှ ကြီးမှူးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကရင် – စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသင်း(ဆီယက်တဲလ်)၊ Northwest Community...
ကာတွန်း စောငို – အိုးမည်းသုတ်စရာလိုဘူးလား
ကာတွန်း စောငို – အိုးမည်းသုတ်စရာလိုဘူးလား ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ခေတ်မီတဲ့အနာဂတ်ရောက်ဖို့ မီးနဲ့ ဘီးကို ထားခဲ့ရမှာလား လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ၊ ဇန်န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၃ သမိုင်းမှာ ကျောက်ခေတ်ကနေ သံခေတ်၊ ကြေးခေတ်၊ နည်းပညာခေတ်တွေ ရောက်ဖို့ မူလခြေတလှမ်းအဖြစ် လူသားတွေ မီးကို စတင် ရှာဖွေတွေ့ရှိတာက စတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ နောက်တခုကတော့ ဘီးကို တီထွင်လိုက်နိုင်တာ။ မီးကို တွေ့ပြီးနောက် ဘီးကို တီထွင်လိုက်နိုင်တဲ့နောက်ပိုင်း လူသားတွေဟာ လောကီဈာန်တွေ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် ရကုန်ပြီး မြေလျိူး၊ မိုးပျံ၊ အကြားအမြင်တွေ ရကုန်တာပဲ။ ကမ္ဘာကြီးကို ခါးစောင်းတင်လိုက်တော့တာပဲ မဟုတ်လား။ အင်ဂျင်စက်၊ မော်တော်ယျာဉ်၊ လေယျာဉ်ပျံ၊ မော်တော်ဘုတ်၊ သဘောင်္၊ ဒုံးပျံတွေ အကုန်လုံးမှာ မီးပါတယ်၊ ဘီးပါတယ်။ ဘီးမဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ခြာခြာလည်နေတဲ့ ပန်ကာတွေ၊ ဒလက်တွေတော့...
Page 189 of 200«1...187188189190191...200»
ဆောင်းယွန်းလ - တဒင်္ဂလေးများ (၂)
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ အပျော်တမ်းအဖွဲ့ https://t.co/KmQHjtnMgA https://t.co/63RzNlYDOL about5hours ago ReplyRetweetFavorite